देउवालाई कसले झु’क्याइयो यसरी दिमाग नै भाउन्न हुने गरी हँ !
October 3, 2021 October 3, 2021 N88LeaveaComment on देउवालाई कसले झु’क्याइयो यसरी दिमाग नै भाउन्न हुने गरी हँ !
काठमाडौँ । मन्त्रालयमा मन्त्री नभएका बेला कर्मचारीहरूले कसरी आफूलाई कार्यक्षेत्र बाहिरसमेत सक्रिय बनाउँछन् भन्ने गतिलो उदाहरण फेला परेको छ। गत साता मुलुकमा भएको एउटा विमानको आकस्मिक अवतरणको आडमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई बेवास्ता गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आफ्नै मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा छानबिन समिति गठन गरेको छ। विभागीय मन्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर […]
October 3, 2021 N88LeaveaComment on श्रीमतीलाई छोएकै नि’हुँमा कु’टपिट गर्दा मृ’त्यु, चन्द्रागिरिबाट दम्पती गिरफ्तार
काठमाडाैं । काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिका–१२ स्थित गुर्जुधारामा सामान्य वि’वादमा कु’टपिटबाट एक जनाको ज्या’न गएको छ । असोज १५ मा कु’टपिटबाट घा’इते भएका धादिङको थाक्रे गाउँपालिका–१० घर भएका दिनेश मिजार को शनिवार साँझ ट्रमा सेन्टरमा मृ त्यु भयो । गुर्जुधारा आसपासमा घुम्ती तरकारी पसल चलाउने ३५ वर्षीय दिनेशलाई स्थानीयले ‘ट्वाँके’ उपनामले चिन्थे । दिनेशको ह त्या […]
यी हुन् सस्तोमा मीठो खाना पाइने काठमाडौंका होटल/क्यान्टिन
October 3, 2021 N88LeaveaComment on यी हुन् सस्तोमा मीठो खाना पाइने काठमाडौंका होटल/क्यान्टिन
काठमाडौं । हामीले दैनिक खानामा घर खर्च कति गर्छौ ? यसकाबारेमा कसैले हिसाब राख्दैन । तर, घरबाहिर खानाखाने गरेका छौँ भने कतिखर्च हुन्छ भन्ने मोटामोटी हिसाब हुन्छ नै । कहिलेकाहीँ हामीलाई काम विशेष वा बाध्यताले पनि घरबाहिर खानाखानु पर्ने अवस्थाआउँछ । कतिपय अवस्थामा अस्पताल बस्दा वाअन्यकामले होटलको खानाखानु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले सफा […]
October 3, 2021 N88LeaveaComment on गगन थापासँग ब’दला लिन सिटौलाले चाले सकुनी चाल, प्रदीप पौडेलको भाग्य चम्किदा, गगन तनावमा !
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलको भाग्य चम्किने संकेत देखिएको छ । स्रोतका अनुसार आफूलाई धो’का दिएर गुट फेरेका युवा नेता गगन थापासँग ब’दला लिनकै लागि कृष्ण प्रसाद सिटौला सभापती शेर बहादुर देउवासँग मिल्न लागेका हुन् । नेपाली काँग्रेसको ६४ जिल्लाको वडा र पालिका अधिवेशन हुँदासम्म को कति श|क्तिशाली बन्यो भन्ने तस्बिर लगभग […]
बालुवाटारबाट गाेप्य सूचना बाहिरिएपछि मन्त्री बन्ने पक्का भएका नेताहरुलाई लाग्यो जोरका झ’ड्का !
October 3, 2021 N88LeaveaComment on बालुवाटारबाट गाेप्य सूचना बाहिरिएपछि मन्त्री बन्ने पक्का भएका नेताहरुलाई लाग्यो जोरका झ’ड्का !
काठमाडौं । मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा फेरि हलो अ’ड्किएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता नपाउदा आ’लोचित बनिरहेको देउवा सरकार फेरि आ’लोचित बन्ने देखिएको हो । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्वको सरकार गठन भएको साढे २ महिना पूरा भइसक्दा समेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । विभिन्न कारणले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा […]
एमालेजस्तो जाली, फटाहा पार्टीले हामीलाई हेप्न खोजेका छन्,तिनलाई घाेक्रेठ्याक पार्नुपर्छ : प्रचण्ड
October 3, 2021 October 3, 2021 N88LeaveaComment on एमालेजस्तो जाली, फटाहा पार्टीले हामीलाई हेप्न खोजेका छन्,तिनलाई घाेक्रेठ्याक पार्नुपर्छ : प्रचण्ड
काठमाडाैं । सत्तासाझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमालेसँग प्रतिवाद गरेर अघि बढ्न पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। अध्यक्ष दाहालले एमाले नेता, कार्यकर्तालाई जाली, फटाहाको संज्ञा दिँदै उनीहरूको प्रतिवाद नगरी आगामी निर्वाचन जित्न नसकिने निष्कर्ष समेत सुनाए। पार्टीको सम्पर्क समन्वय विशेष प्रदेश समितिले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उनले […]
भुइँमा एमाले, रूखमा एमाले, झुपडीमा एमाले, खम्बामा एमाले’ हाय… मेराे देश (तस्वीरहरू)
October 3, 2021 October 3, 2021 N88LeaveaComment on भुइँमा एमाले, रूखमा एमाले, झुपडीमा एमाले, खम्बामा एमाले’ हाय… मेराे देश (तस्वीरहरू)
काठमाडौँ । शुक्रबारदेखि ललितपुरको गोदावारीमा रमिता छ। दशैँ लागेको छ। चहलपहल र भीडभाड छ। गोदावरीको शान्त जंगल नै अचम्म परेको छ। यहाँसम्म पुग्ने सडक यदि बोल्न सक्थ्यो भने, भन्थ्यो होला- ‘यसरी ह्वात्तै मेरो भारी किन गह्रुंगो भयो ?’ कुरा हो, एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन। सात्दोबाटोबाटै गोदावारीसम्म महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै विभिन्न ध्वजा र झण्डाहरु टाँगिएका छन्। झुन्डाइएका […]